သင်ဇာနွယ်ဝင်း နှင့် မိုးယုစံ ကို ဖ*သာသာဆိုပြီး ပြောလိုက်တဲ့ Cele Cele Small - Myanmarload
သင်ဇာနွယ်ဝင်း နှင့် မိုးယုစံ ကို ဖ*သာသာဆိုပြီး ပြောလိုက်တဲ့ Cele Cele Small
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 13:32 January 01, 2017
အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အတင်းတွေ သတင်းတွေကို တင်နေကြဖြစ်တဲ့ cele cele small က ခဏအနားယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ယခုတလောဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အကြောင်းတွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယခုလိုပြောထားပါတယ်။
'အနုပညာလောကက ဖာသာသာဆွာ ဒီမသာမနှစ်ယောက်က သက်သေပဲ..... မိုးချူစံက. သူ့ကိုကြော်ငြာရိုက်ဖို့ငှါးတဲ့ သူဋ္ဌေး လူယုံ အူးစည်သူဆိုတဲ့ အူးလေးကြီးကို ငွေမက်လို့ချူစားခဲ့တယ် ပြီးတော့မာယာနဲ့သိမ်းသွင်း မိုးချူစံမိဘတွေကိုယ်တိုင်က အလိုတူအလိုပါတွေ.....အူးလေးကြီးကိုကားတွေဝယ်ခိုင်း
စိန်တွေဝယ်ခိုင်း အိမ်တွေပြင်ဆောက်ခိုင်းနက် ပြီးတော့မိုးယု့ကိုချစ်ရင်အူးလေးကြီးမိန်းမနက်တရားဝင်ကွာရှင်းပေးဆိုပြီး ပလီ.... အူးလေးကြီးကတစ်ကယ်လဲကွာရှင်းခဲ့ရော ယုန်လေး နှာစေး ပါတယ်လုပ်...ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်.... ဆက်ပြီးချူစားအူးလေးကြီးမယားကြီးခမျာ သားနှစ်ယောက်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်
လက်ညိုးထိုးခဲ့သမျှခံရ.... နောက်ဆုံးချုပါများတော့ အူးလေးကြီးခမျာ လုပ်ငန်းပိုက်ဆံတွေအလွဲသုံးစားမှုနက်ရဲဖမ်း...ထောင်တစ်နှစ် ကျ.....ရဲတွေက. လုပ်ငန်းပိုက်ဆံနဲ့အူးလေးကြီးကမိုးချူစံကို ဝယ်ပေးထားတဲ့ ကားတွေလက်ဝတ်ရတနာတွေကိုမိုးချူစံဆီကို သွားသိမ်းတော့ လန့်ဖျတ်ပြီးမိုးချူစံခမျာ ကြောက်ကြောက် လန့်လန့်နဲ့ပြန်အပ်ပေးလက်ရတယ်....ဒါကိုမယားကြီးကမကျေ နပ်တော့ မီဒီယာတွေဖွင့်ပြောမှာကြောက်လို့ မယားကြီးရဲ့
အလုပ်ပိုင်ရှင်အထက်လူကြီးကို မယားကြီးဖွင့်မပြောပြဖို့ အမိန့်ပေးဖို့ခြိမ်းခြောက်ခိုင်း....ခုတော့ပိုက်ဆံရှိတဲ့ နွားကိုယူပြီး သာယာနေလေရဲ့.... ဟိုမသာမသဥ္ဇာနွယ်ဝင်းကရောဘာထူးလဲရဲရင့်အောင်ကို ဖြတ်ပြီး ငွေနောက်လိုက်သွားတာ....အို....မထူးပါဘူး.....မိုးချူစံတို့လင်မယားနက်သဥ္ဇာနွယ်ဝင်းတို့အတွဲ ကိုတစ်အိမ်ထဲတူတူထားပစ်လက်ရမှာ....အိုခီ.....ယားချင်တာယား ချူမစားနက် ညလုံးပေါက်တိုင်းအဘွတ်ခံ ရလက်မယ်......ဟုတ်....ကျိုင်းဇူးပါစင့် ။။ ။။
Cele Cele Small ?' ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပြီးခဲ့တာတွေဟာ ပြီးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး မိုးယုစံ ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး သင်ဇာနွယ်ဝင်းကလည်း သူ့ဘဝနှင့် သူဖြစ်နေပါပြီ။ လူတိုင်းဟာ မှားဘူးကြသလို မှားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို လည်း သူတို့သိကြမှာပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော်သင့်ပါပြီ ဆယ်ဆယ်ရယ်....